गण्डकीमा २८ हजार भूमिहीन, ८० हजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने | eAdarsha.com
गण्डकीमा २८ हजार भूमिहीन, ८० हजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
मंसिर २८, २०७७
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा करिब २८ हजार परिवारसँग आफ्नै जग्गा छैन । दलित र सुकुमबासीसहित २७ हजार ८ सय ५३ जना जग्गाविहीन रहेको तथ्याङक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग छ । ११ हजार १ सय ८३ भूमिहीन दलित छन् भने १६ हजार ६ सय ७० भूमिहीन सुकुमबासी छन् । त्यसबाहेक ५२ हजार परिवार अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । ८० हजार ४ सय ६२ परिवारलाई सरकारले व्यवस्थित रुपमा जग्गासहित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया थालेको छ । शनिबार गण्डकीका ३६ स्थानीय तहसँग आयोगले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । जग्गाजमिन नभएकालाई घडेरीसहितको जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित रुपमा बसिरहेकाहरुलाई शुल्क लिएर जग्गा दिने गरी विवरण तयार गर्न स्थानीय तहसँग समझदारी गरिएको हो ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरु नवलपुरमा सबैभन्दा धेरै छन् भने मनाङमा सबैभन्दा कम छन् ।
१९ नगरपालिका र १७ गाउँपालिकासँग एकैपटक सम्झौता गरिएको हो । कास्कीको रुपा र नवलपुरको कावासोतीमा पाइलट प्रोजेक्ट रुपमा मंसिर पहिलो साता नै सम्झौता गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । संविधानले सुरक्षित आवासलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । ३ वर्षभित्रमै सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यो काम टुङ्गिन सकेको छैन । त्यस्ता घरपरिवारको खोजी गर्ने र अध्ययन अनुगमनका लागि पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने छ । जग्गा प्राप्तिका लागि पालिकाले वडास्तरमै समिति बनाएर सिफारिस माग्ने छ । त्यहीँ सिफारिस अध्ययन गरेर जिल्लामा पठाउने तथा जिल्लाले आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । आयोगले निर्णय गरेपछि जिल्लाबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
‘वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । यसमा कसैले कमजोरी गर्न पाउँदैन,’ आयोगका गण्डकी संयोजक एकबहादुर रानाले भने, ‘गलत नियतले सिफारिस गरेको भेटिए दुवै पक्षलाई कडा कारबाही हुन्छ ।’ कार्यविधिअनुसार लालपुर्जा नलिए पनि ढाँटछल गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना तोकिएको छ भने लालपुर्जा लिएकालाई १ लाख जरिवाना, सम्पत्ति जफत र १ वर्ष कैद सजायँ हुनेछ । यस्तो सिफारिस गर्नेलाई समेत २५ हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
भूमिहीनले नेपालका जुनसुकै ठाउँमा भए पनि निःशुल्क जग्गा पाउनेछन् । अव्यवस्थित रुपमा बसेकाहरु चाहिँ सार्वजनिक ठाउँ, सामुदायिक वन, पुरातात्विक महत्वका ठाउँमा भए जग्गा पाउँदैनन् । त्यसबाहेक जग्गा भए प्रक्रिया अनुसार भोगचलन आधारमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइने छ । तर उनीहरुले राज्यले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ । भूमिहीनहरुलाई सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्ग मिटर जग्गा बस्न दिइने छ भने कृषि प्रयोजनका लागि २ हजार वर्गमिटरसम्म उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमिटर बसोबासका लागि जग्गा पाउँछन् । अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि आवासका लागि १ सय ३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि छुट्टै जग्गा दिइने छ । तर उनीहरुसँग अन्यत्र कतै जग्गा हुनु हुँदैन । यद्यपि जग्गा वितरणबारे थप मापदण्ड तयार हुँदैछ ।
गण्डकीमा सबैभन्दा बढी नवलपुरमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन् । नवलपुरमा मात्रै २५ हजार ७ सय ११ परिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने तनहुँमा १९ हजार ९ सय ६१, कास्कीमा १६ हजार १ सय १४, बागलुङमा ६ हजार २ सय १७, पर्वतमा ३ हजार १ सय १७ परिवार छन् । स्याङ्जामा २ हजार ८ सय ५८, लमजुङमा २ हजार ६ सय ३३, गोरखामा २ हजार १ सय ४५, म्याग्दीमा १ हजार ४ सय ७६, मुस्ताङमा १ सय २८ र मनाङमा १ सय २ परिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रुपमा बसिरहेका छन् ।
सम्झौता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमि व्यवस्थापन गर्न एकीकृत ऐन आवश्यक भएको बताए । ‘कहाँ बस्ती बसाउने र कहाँ खेती लगाउने भन्ने ठाउँ तोकिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । यति गर्दा पनि जथाभावी घर बनाए कारबाही गर्नुपर्छ ।’ जग्गा दिने भन्दा अनावश्यक रुपमा संख्या बढ्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आयोगलाई उनले सुझाए । ‘धेरै चलखेल हुन सक्छ । छोटे राजनीति धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दलहरुले पनि यो पार्टी र ऊ पार्टी नभनी सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपालको नयाँ नक्सा तत्कालै जारी गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए ।
संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिको अधिकतम् उपयोग गरी उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । उनले वैज्ञानिक भूमि सुधार व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग कानून निर्माण गरेर नयाँ जमिनको वर्गीकरण गरिने दाबी गरिन् । अव्यवस्थित र भूमिहीनहरु सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा रहेको भन्दै उनले तिनको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताइन् । ‘अव्यवस्थित र भूमिहीन सुकुमबासी समस्या समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन्, ‘वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गरेर उनीहरुको समस्या हल गरिन्छ । त्यसका लागि सहकारी मोडल, भूमि बैंकको स्थापना आवश्यक छ ।’ निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या परे पनि समाधान हुन नसकेको भन्दै यहीँ सरकारले अब त्यो टुङ्गो लगाउने उनको भनाइ छ ।
संसद पुनर्स्थापनापछि विजय र्‍याली
पोखरा । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको खुसीयालीमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले देशका विभिन्न भागमा बुधबार विजय उत्सव ¥याली निकालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी…
गठन भयो पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कुलपतिमा पदमराज ढकाल
पोखरा । नाम सिफारिसको लामो समयपछि पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बुधबार कुलपतिसहित…
काेराेनाले नेपालमा २ हजार ६ सय ८४ काे ज्यान लियाे
काठमाडौं– नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय १८ ले बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १ वर्षको…
‘प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउन सक्दैनन्, वैधता नै छैन ’
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नैतिकता भए तत्काल राजीनामा…
मुलुकभर दाहाल नेपाल नेपाल समूहकाे देशभर खुशीयाली सभा
पाेखरा : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर्‍याउँदै पुनःस्थापना गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आज राजधानीसहित मुलुकभर…
ओली समूहकाे स्थायी समिति बैठक: सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने
कोरोनाको खोप : पहिलो चरणमा लक्ष्यको ८५ प्रतिशतले लगाए
प्रधानमन्त्रीले बोलाए पार्टी स्थायी कमिटी बैठक
सर्वाेच्चकाे फैसलाकाे सर्वत्र स्वागत, खुसियालीमा दीपावली
संसद् पुनर्स्थापना जनता र संविधानवादको जितः सभामुख सापकोटा
पुस ५ पछि सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति स्वतः खारेज
फोनिजको डिजिटल जर्नालिजमबारे अन्तरक्रिया
रुपाकोट रिसोर्टले निस्काशन गरेका मजदुरको पुनवर्हाली माग्दै ज्ञापनपत्र
आरतीको ‘लुकी लुकी मायाले’ सार्वजनिक
नेपाल–भारत मैत्री संघको साधारण सभा
एकै खेलमा ट्रिपल ह्याट्रिक
भलिबल विजेतालाई गृहजिल्लामा सम्मान
डिभोर्सले डोर्‍यायो चुचुरो
Happy childhood? No guarantee for good mental health!
At least 75 jail birds died in Ecuador prison riots
NCP Dahal-Nepal Group organises celebration rally
COVID-19 : 94 news cases, 71 recoveries, one death
Leader Gautam calls for convening NCP Secretariat meet
COVID-19 affected schools in Manang reopen after one year
ANFA reaches agreement with Shahid Gangalal hospital